ရေကူးကန်နှင့်အတူ Oceanfront တိုက်ခန်း !! - ATLAS Tenerife®အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း
ပင်မစာမျက်နှာရေကူးကန်နှင့်အတူ Oceanfront တိုက်ခန်း !!
ရောင်းရန်: Playa Sibora, Tenerife ရှိပထမဆုံးသမုဒ္ဒရာရေတန်းတိုက်ခန်း။
အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ !! တိုက်ရိုက်သမုဒ္ဒရာမှာပြီးပြည့်စုံသောတည်နေရာ!
water sea community sea sea roof sea sea sea sea water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water water ကြီးမားသောပင်လယ်ရေကူးကန်၊ ဥယျာဉ်များ၊ WIFI နှင့်ရပ်ရွာလူထုအခကြေးငွေနည်းပါသည်။
တစ်ခုချင်းစီကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်နှစ် ဦး ဓာတ်လှေကား။ ဝင်ပေါက်မှာအခမဲ့အများပြည်သူယာဉ်ရပ်နား။ အိမ်သာနှင့်ည့်ခံareaရိယာ။ နေထိုင်သူများအတွက်သာဝင်ရောက်ခွင့်။
ကမ်းခြေများ၊ လှိုင်းအစက်အပြောက်များ၊ သဘာဝရေကန်များ၊
၃၆၀ ºမြင်ကွင်း + ကျယ်ဝန်းသည့်ကားရပ်နားရန်ရှိသောလုံးချင်းအိမ်
Los Silos ၏ Plazeta တွင်တိုက်ခန်းကြီး !!